Karaiba: Misy tsininy any amin'ny paradisa
Home » Lahatsoratra farany farany » Karaiba » Karaiba: Misy tsininy any amin'ny paradisa
Karaiba • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
“Raha mandà ny sakafo ianao, tsy miraharaha ny fomba amam-panao, matahotra ny fivavahana ary misoroka ny olona, ​​dia aleo mijanona ao an-trano ihany.” - James Michener
Sarotra ny tena izy
Misy lafiny roa farafahakeliny ny Fizahan-tany any Karaiba indostria: ny traikefa ananan'ireo mpandeha an-tongotra rehefa mivezivezy avy amin'ny seranam-piara-manidina amin'ny vanim-potoana misy alim-baravarana sy hotely any amin'ny hotely misy azy ireo, ary ny eo an-toerana - ireo toerana ipetrahan'ny mpiasa fizahan-tany, mandeha mianatra, mitsidika namana sy fianakaviana ary manao fety ary mankafy fotoana filalaovana .
Raha mandany $ 1300 isan-alina ny mpizahatany (tsy ankanavaka ny haba sy ny sarany) any Sandy Lane hividianana trano fandraisam-bahiny any Barbados, ireo olona manome traikefa lafo vidy dia toa tsy afaka mividy na dia indray hariva aza ao amin'ilay trano. Ny salan'isan'ny karama ankapobeny ho an'ny mpitantana hotely dia 60,000 dolara (30,000 $ US); mpikarakara trano: BBD26,000 (US $ 13,000); mpandray fandraisam-bahiny: BBD 21,012 (10,506 $ US) (averagesalarysurvey.com, 2019). Ny mpivarotra bartender any Barbados dia mahazo eo anelanelan'ny BBD 670 isam-bolana (US $ 331.90) ka hatramin'ny BBD 2,070 isam-bolana (US $ 1,025.43) (2020).
Any Trinidad sy Tobago, ny salan-karaman'ny mpitantana ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany - TTS 105,000 (16,078 406,200 dolara amerikana); mpitantana hotely, TTS 60,431 (US $ 80,000); mpizaha tany TTS 11,941 (30,000 4,691 US $); mpikarakara trano, TTD 766.00 (XNUMX US $). Ao amin'ny Villas at Stone Haven any Trinidad / Tobago, handany iray alina amin'ny trano fandraisam-bahiny iray dia mitentina US $ XNUMX - ao anatin'izany ny haba sy ny sarany (google.com/travel/hotels/Tobago)
Times BC, Talohan'ny COVID-19
Talohan'ny nitondran'ny COVID-19 an'izao tontolo izao dia nihombo ny fizahan-tany ny faritra Karaiba. Ny fahatongavan'habakabaka amin'ny faritra Karaiba midadasika dia niakatra 12 isan-jato tamin'ny telovolana voalohany 2019, ny taha ambony indrindra amin'ny faritany tamin'izany fotoana izany tamin'ny kalandrie nandritra ny taona maro. Anisan'izany ny:
• Mpizahatany iraisam-pirenena I9.1 tapitrisa tonga any amin'ny faritra tao anatin'ny telo volana voalohany tamin'ny taona 2019, izay nampitomboina ny mpitsidika 970,000 XNUMX any Karaiba.
• Nahitana fitomboana ihany koa ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo any amin'ny faritra, izay nisy ny fitsambikinana 9.9 isan-jaton'ny fahatongavan'ireo mpandeha an-tsambo ary totalin'ny 10.7 tapitrisa tonga tao anatin'io fotoana io.
• Etazonia no nijanona ho tsenan'ny fizahan-tany lehibe indrindra any amin'ny faritra, mitahiry mpizahatany 4.5 tapitrisa ao anatin'io fotoana io, raha nandefa mpitsidika 1.5 tapitrisa tany Karaiba i Kanada, maneho ny fiakarana 4 isan-jato.
Ny firenena nosy Karaiba dia miankina betsaka amin'ny fizahan-tany ho an'ny asa ary manome mihoatra ny 90 isan-jaton'ny asa rehetra any Antigua sy Barbuda. Tamin'ny taona 2019, iray isaky ny olona 10 any Karaiba no niasa tamin'ny asa fivezivezena mifandraika amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, izay nanolotra $ 8.9 trillion (eo amin'ny 10.3 isan-jato) amin'ny toekarena manerantany.
Miaraka amin'ny fahatongavan'i COVID-19, ny indostria dia mandany asa sy fidiram-bola, miaraka amin'ny ratsy indrindra mbola ho avy. Ny fatiantoka lehibe indrindra amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany noho ny areti-mifindra dia ny) Bahamas (-72.7 isan-jato), Dominica (-69.1 isan-jato), Aruba (-68.1 isan-jato), St. Lucia (-68.5 isan-jato) ary Bermuda (-61.7 isan-jato).
Optimista maso-maso na fisainana majika
Na dia nilaza tamin'ity tontolo ity aza ny quarantine fa tsy tokony hivezivezy ary tsy hifangaro sy hifangaro amin'ny hafa any amin'ny trano fisotroana sy fisakafoanana, ny ezaka marketing ho an'ny faritra Karaiba dia mitarika hatrany ny ezak'izy ireo handrisika ireo mpizahatany hidina amin'ny fiaramanidina na sambo iray ary hankany amin'ny Karaiba. Ny ezaka fifandraisam-bahoaka sy ny doka dia mijanona ho mahatoky hatrany amin'ny fampisehoana tany nofinofy izay tsy manome safidy hafa ho an'ny fizahantany ara-tontolo iainana ary mitazona ny lafiny maizin'ny firenena Nosy tsy ho ao an-tsain'ny mpitsidika.
Toerana maro any amin'ny nosy no manana seranam-piaramanidina manara-penitra miaraka amin'ny fandraisana an'i Pina Colada isaky ny tonga. Ny fitaterana an-tanety any amin'ny terminal dia mitondra faingana ny fahatongavany any amin'ny hotely misy mpamily voaofana amin'ny kanton'ny "chit chat." Miresaka ny mpamily, (indraindray tsy mitsahatra) miaraka amin'ny fikasana hitazomana ny mpandeha hanelingelina ny fahantrana manodidina ny seranana. Ny fampahalalana mihetsika (sy mahaliana matetika) avy amin'ny mpamily dia mety ahitana fampahalalana momba ny toetr'andro nohavaozina, ny mari-pana amin'ny ranomasina, ary ny tantara eo an-toerana. Amin'ny tranga maro dia mamporisika ny mpitsidika ny mpamily hiresaka momba ny tanindrazany, ny faharetan'ny fotoana nahatongavan'izy ireo ary inona no kasain'izy ireo hatao mandritra ny fialantsasatr'izy ireo.
Rehefa nihena ny resaka tamin'ny ankizy sy ny biby fiompy, dia ao amin'ny hotely fitsidihan'izy ireo ny mpitsidika, miditra amin'ny faritra fandraisam-bahiny, misoratra anarana ary mandefa any amin'ny efitranony sy any amin'ny efitranon'ireo mpiasa manintona miaraka amin'ny tsiky sy fiarahabana mafana. Eo anelanelan'ny sakafo maraina sy sakafo hariva dia ampialain'ny mozika nosy, zava-pisotro eo an-toerana ary safidy fisakafoanana gourmet iraisam-pirenena ny vahiny, amin'ny tranga maro, mitazona azy ireo ao amin'ny rindrin'ny hotely mandritra ny fialantsasatra iray manontolo.
Ny any ivelan'ny hazo palma dia ivelan'ny tombontsoana, ny filàna ary ny filan'ny mpitsidika iraisam-pirenena. Ny maha-karama ny mpiasa ambany karama farany ambany, ny fiakaran'ny haavon'ny heloka bevava dia nanimba ny fahatokisan'ny mpampiasa vola ary nampihena ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fampidirana vidiny ambony kokoa amin'ny endrika fiarovana fanampiny na fandaniana transactional dia tsy mahaliana an'ireo mpizahatany ireo. Ny antony mahatonga ny heloka bevava dia miteraka sidina an-drenivohitra, miaraka amin'ny famoizana olona manana fahaiza-manao na fanabeazana, izay misafidy ny hiasa amin'ny toerana azo antoka kokoa sy azo antoka kokoa, dia tsy misy vokany amin'ireo vahiny ireo ary ny hotely dia manao izay ho afany mba hahazoana antoka fa tsy misy na iray aza ny zava-misy henjana amin'ny toerana alehany dia miditra amin'ity fiainana fialantsasatra nofinofy ity.
Sombin'aina iray hafa
Ireo mpitsidika vonona ny hiala eo ivelan'ny vondron'olona fialan-tsasatra mihidy, ary mifampiresaka amin'ireo mponina ao an-toerana, dia mety hahita fa ny heloka bevava dia mamily ny loharanom-pahefana voafetra hiala amin'ny fahasalamana sy ny fanabeazana ho amin'ny filaminana. Any amin'ny nosy maro, ny fikarohana dia manolo-kevitra fa ny olom-pirenena dia miahiahy bebe kokoa amin'ny heloka bevava noho ny amin'ny olana hafa toy ny tsy fananan'asa, ny fitsaboana ary ny fanararaotana ataon'ny fianakaviana.
Tamin'ny taona 2019, ny taha avo indrindra amin'ny famonoana olona dia voasoratra tany Venezoela, miaraka amin'ny famonoana olona 60 mahery isaky ny mponina 100,000 2018 (statista.com). Jamaica (47) dia nandrakitra ny tahan'ny famonoana olona 100,000 isaky ny mponina 3.4 2019 miaraka amin'ny fiakarana 2017 isan-jato herintaona taty aoriana (10) (osac.gov) izay avo telo heny noho ny salanisa ho an'i Amerika Latina sy Karaiba. Ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (IMF) dia nilaza fa ny heloka bevava no vato misakana voalohany amin'ny fitomboana ara-toekarena ary ny governemanta Jamaica dia nahatsikaritra fa ny kolikoly sy ny heloka bevava ampitan-tany ampiasainy dia miteraka fandrahonana lehibe ho an'ny filaminam-pirenena (osac.gov/). Forbes Magazine dia nitanisa an'i Jamaika ho toerana fahatelo mampidi-doza indrindra ho an'ireo vehivavy mpandeha (2018) ary ny Business Insider no nametraka ny laharana faha-XNUMX amin'ireo toerana mampidi-doza indrindra eto an-tany (XNUMX).
Ny departemanta amerikana misahana ny fizahan-tany dia manombatombana ny Bahamas amin'ny haavo 2, milaza fa tokony hitandrina ny mpitsangatsangana noho ny asa ratsy. Ny trangan-javatra misy ny olom-pirenena amerikana dia misy ny fanolanana, fanaovana herisetra ara-nofo sy fandrobana / fangalarana sy fandrobana mitam-piadiana, heloka bevava amin'ny fananana, fangalarana poketra, fisolokiana ary fanaovana herisetra ara-nofo no heloka bevava mahazatra indrindra ataon'ny mpizahatany (osac.gov).
Nahita fitomboan'ny fisian'ny tafika amerikana ny lalan-dranomasina Karaiba mifantoka amin'ny fanoherana ny fanondranana rongony an-tsokosoko any amin'ny sambo semi-submersible sy ny fandefasana solika sazy avy any Iran ka hatrany Venezoela.
Na dia mankafy hetsika atao any Karaiba aza ireo mpizahatany izay misy ny fitsangantsanganana, filomanosana ary fisitrihana scuba, ny ranomasina dia manolotra hetsika ratsy hafa. Talohan'ny areti-mandringana dia namoaka mpitsidika an'arivony ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo, nampahafantatra azy ireo ny fiheverana ny amin'ny fanambinana. Ny ankamaroan'ny nosy dia mandoa vola isaky ny loha amin'ny sambo fitsangantsanganana isaky ny mpandeha izay miakatra an-tanety. Ireo mpandeha fitsangatsanganana dia tsy miraharaha ny fanimban'ny sambo ny haran-dranomasina sy ny fiainana an-dranomasina ary manana sakana amin'ny vola lanin'ny mpandeha an-tsokosoko. Ankoatr'izay, ireo sambo fitsangantsanganana an-dranomasina, izay tian'ireo mpandeha eran-tany an-tapitrisany maro, dia nanatitra ny COVID-19 tany amin'ny toerana maro sy olom-pirenena teo an-toerana tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 satria tsy nanan-kery ireo mpitantana orinasa rehefa tonga ny fotoana hanaovana pro-activisme hiadiana amin'ny areti-mifindra virus. Ho fampifangaroana ny olana dia sambo maro no nijanona an-dranomasina niaraka tamin'ny marary COVID-19 tao anaty fiara - ka tsy afaka (tsy navela) hidina ny mpandeha sy ny ekipazy.
Ny haran-dranomasina madio any Bonaire (Holandey) dia mahatonga ity nosy ity ho seranan-tsambo malaza sy sambo fitsangantsanganana mahasosotra hatramin'ny mpandeha 4000 indray mandeha. Indraindray ny sambo dia niteraka ny tsy fahampian-tsakafo tamin'ny alàlan'ny fakana ny dock dock izay natokana ho an'ny entana. Vondrona toa ny Bonaire Future Forum: niady hevitra ny amin'ny mety hanararaotan'ilay nosy ny sambo manokana misy làlana lafo vidy kokoa noho izany ny nosy ary noho izany dia mifantina kokoa amin'ny mombamomba ny mpandeha.
Mampifandanja ny fizahantany
Raha misy ny ho avy ho an'ny fizahantany any amin'ny faritr'i Karaiba, angamba ho avy izany amin'ny alàlan'ny fiatoana amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany amin'ny fotoana ampiasaina hanombanana ny vokatra fizahan-tany. Ny fiovan'ny toetr'andro, ny fanjavonan'ny karazana, ny fanapotehana ala, ny fampiasana zaza tsy ampy taona, ny fanararaotana ara-nofo ary ireo “faharatsiana” maro hafa, dia maneho ny tsy fahombiazan'ny fizahan-tany marobe.
Ny dingana voalohany dia mitaky fanombatombanana marina ny fananana isam-paritra ary ny fanoloran-tena amin'ny faharetana sy ny fandraharahana eo an-toerana. Ny fizahantany betsaka dia niaraka tamin'ny fiankinan-doha lehibe amin'ny famatsiam-bola avy any ivelany amin'ny fampandrosoana, fampiroboroboana ary fitantanana fananana. Ireo toeram-pizahantany "indostrialy" dia tsy voafehy ary tsy dia kasaina loatra ka miteraka fitomboan'ny fahasarotana sy fahalemena izay miteraka krizy ara-bola amin'ny tranga maro.
Ny fitambaran'ny fandrahonana biolojika toy ny fipoakan'ny volkano, ary ny fiovan'ny tontolo iainana izay mitarika rivo-doza mahery sy fiakaran'ny haavon'ny ranomasina miaraka amin'ny korontana ara-toekarena avy amin'ny fihenan'ny resa-be manerantany dia mitarika krizy ara-pahasalamana COVID-19 ankehitriny. Ny am-polony taona faramparany dia nametraka fanerena goavambe tao amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy indostrialy ary tsy nisy fotoana firy hijerena sy handinihana lesona nianarana. Raha jerena ny zava-misy fa ny fizahantany dia nanjary fananana ara-toekarena manan-danja indrindra ao amin'ny faritra, mampalahelo fa toa tsy niraharaha ireo loza teo aloha; na izany aza, mandroso, izy ireo dia mety hanome ny fototra ho amin'ny ho avy maharitra.
Mba hitohizan'ny faritra sy hambinina dia tsy maintsy ampifanarahiny amin'ny fifaninanana atsy ho atsy sy ny fanovana takian'ny tsena manerantany; noho izany dia mila manaiky sy miomana amin'ny fanavaozana, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny famerenana amin'ny laoniny ny vokatra. Amin'ny maha indostria azy dia tokony hanaiky ny marefo sy mora miovaova izy ary vonona ny hanoratra sy hanazava ny lafiny tsy manam-paharoa amin'ny fananany sy ny fomba fanaony izay mampiavaka ny nosy iray amin'ny iray hafa ary ny kolontsaina iray amin'ny iray hafa raha sady miaro ireo fananana sisa tavela amin'ny fanimbana bebe kokoa.
Ny nosy malaza indrindra amin'ny fizahantany ara-tontolo iainana dia misy an'i Dominica, fantatra amin'ny anarana hoe Island Island of the Caribbean, izay 65 isan-jaton'ny tany no ala mando tropikaly ary maherin'ny 300 kilaometatra no natokana ho an'ny lalan-tongotra. I Bonaire dia malaza amin'ny tontolo iainana an-dranomasina madio raha i Costa Rica sy i Belize kosa dia malaza amin'ny fisian'izy ireo tia tontolo iainana. Ny Resorts amin'ireo nosy ireo dia misy fiatraikany ambany miaraka amin'ny fanoloran-tena hampihena ny fampiasana angovo na angovo azo havaozina miaraka amin'ireo hetsiky ny mpitsidika dia mamporisika ny hianatra momba sy hankafy ny tontolo iainana.
Mihazakazaka mifanitsy amin'ny fizahan-tany faobe
Ny fomba fizahan-tany fizahantany vaovao dia hifantoka amin'ny kalitaon'ny traikefa fizahan-tany fa tsy amin'ny habetsahan'ny mpizahatany tonga amin'ny rivotra na an-dranomasina. Ny traikefa kalitao dia tsy hiankina amin'ny dolara lanin'ny mpitsidika, fa ny harenan'ny fotoana izay ho mora tohina ara-kolontsaina, mifantoka amin'ny lafiny maha-olombelona ny toerana haleha. Ny fifehezana ny vokatra fizahan-tany vaovao dia tsy eo am-pelatanan'ny banky na ny mpampiasa vola vahiny, fa kosa fehezin'ny mpandraharaha eo an-toerana sy ny solontenany.
Ny fifantohana amin'izao fotoana izao amin'ny fizahan-tany marobe sy amin'ny famoronana fidiram-bola be dia mitaky fitomboana tsy tapaka ny isan'ny mpizahatany izay nafindra tamin'ny alàlan'ny rafitra izay tsy misy ahiahy firy ny kalitaon'ny traikefa fizahan-tany na ireo tombontsoa mety hitranga amin'ny serivisy eo an-toerana mpamatsy. Ankoatr'izay, ny tombom-barotra avy amin'ny fizahan-tany be dia be mivoaka ivelan'ny firenena, miafara amin'ny banky ivelany sy paosin'ny tompon-trosa.
Ireo tsena vaovao dia hamporisika ny mpitsidika amin'ny fahatsiarovan-tena "mifoha" izay faly amin'ny fanohanan'ny mpandraharaha eo an-toerana sy ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ireo mpitsidika vaovao ireo dia hanao izay farany azony atao mba hametrahana ny dian-tongony any amin'ilay toerana alehany satria ny fahalianany sy ny faniriany dia ny hampiadana ny diany, mitady fitsaharana, fanasitranana, fahasalamana ary fianarana; Ireto mpandehandeha ireto dia aleony heverina ho GUSETS fa tsy toy ny mpanjifa manana carte de crédit, kaonty banky ary portfolio stock. Ny trano sy ny toerana mahasarika dia hahitana toerana lavitra izay azo zahana sy kilemaina ho an'ny toerana tsy jerena ho toerana voalohany hampivoarana ny fizahantany betsaka.
Ny vokatra fizahantany fizahantany vaovao dia hanasongadinana ny fiatraikany manokana tsy eo amin'ny fizahan-tany fizahan-tany izay itondrana olona, ​​toerana ary manintona toy ny entana. Ny fizahantany ara-tontolo iainana dia hifantoka amin'ny bionetwork, miaraka amin'ny fanamafisana ny faharesen-dahatra, ny fahatsapana ny toerana ary ny fikitihan'ny olombelona. Ny traikefa fizahan-tany vaovao sy ara-tontolo iainana dia ahitana fananana eo an-toerana: jono, antsitrika scuba, snorkeling, fijerena vorona, fiambenana sy fitsimbinana sokatra an-dranomasina, ary fialamboly amin'ny fomba Karaiba toy ny sambo, kayak, mandeha an-tongotra, lomano, fitsangatsangana miampy fikarakarana sy asa tanana - nampianarina avy amin'ny mpanakanto sy mpahandro ao an-toerana.
Ny menus culinary dia hametraka safidy fisakafoanana very izay very rehefa nifindra hotely sy hotely fisakafoanana mega avy amin'ny vondrona sakafo any an-toerana ka lasa nahandro iraisam-pirenena. Ireo chef efa voaofana eto an-toerana, mampiasa sakafo avy amin'ny toeram-piompiana akaiky, dia hampirisika hankasitraka vaovao ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao amin'ny firenena nosy tsirairay. Ny sakafo, fivoriana hariva, fety kaominaly, hetsika mozika sy kolontsaina, hatrany amin'ny fiantsenana zava-kanto sy zava-kanto avy amin'ny mponina - dia hanasongadinana izay misy amin'ny alàlan'ny mpandraharaha ary zaraina amin'ny namana sy fianakaviana - hamorona famaritana vaovao momba ny "inclusive all." Hovelomina indray ireo orinasa taloha - manomboka amin'ny fiompiana akoho sy omby, hatrany amin'ny fambolena sy ny zavamaniry fikarakarana akora.
Ny varotra ecotourism dia hifantoka amin'ny traikefa izay miorina amin'ny natiora. Ny fandinihana sasany dia nahatsikaritra fa mpizahatany maro (83 isan-jato) no tia ny hevitra hoe maintso sy miaro ny tontolo iainana. Ny fanasana maintso- ny fotokevitra "lets-pretend" momba ny ecotourism dia tsy hoe ecotourism. Ny iray amin'ireo foto-kevitry ny Greenwas dia endrika marketing mamitaka satria ny mpivarotra sy ny mpanolo-tsain'izy ireo dia mampiroborobo ny toerana TSY arovan'ny fitsipiky ny tontolo iainana na ny fitsipi-pitondrantena na fitsangatsanganana ara-tontolo iainana izay manana finamanana tontolo iainana amin'ny anarany fotsiny. Ny mpizahatany mitsidika toeran-kaleha, miverina mody, mino fa nanampy ny tontolo iainana izy ireo fa tsy nanao izany. Ny programa sy ny fomba fanao toy izany dia tsy maintsy fantarina sy esorina na ovaina - tsy ekena intsony ny fampidinana vola amin'ilay mpizahatany tsy ampoizina.
Ireo vitrana ecotourism vaovao dia azo amidy manerantany amin'ny ambaratonga tetibola noho ny haitao vaovao izay manome ny e-marketing ho an'ireo mpandraharaha manana kaonty banky kely nefa misy fahaiza-manao lehibe ary fahitana mazava. Hampiroborobo ny orinasa amin'ny alàlan'ny tranokala namboarina ho mpandraharaha, manolotra làlana sy traikefa manokana momba ny fialantsasatra ho an'ny tena manokana fa tsy fitsangatsanganana noforonin'ireo mpandraharaha fizahan-tany manerantany. Ny traikefa manokana dia hotarihin'ireo mpahay tantara eo an-toerana sy ireo mpitarika ny vondrom-piarahamonina izay afaka manome io toerana manokana io ho an'ny fialantsasatra hafa.
Ny fanaraha-maso sy ny fanohanana ara-politika avy amin'ny masoivohon'ny governemanta dia hiantoka ny fanajana ny zon'ny mpandraharaha ary hisorohana ny fandraisana vahiny na ivelany. Manohana eo afovoany, ny fiaraha-miasa amin'ny daholobe / tsy miankina dia ahafahan'ny tontolon'ny fifaninanana fanomezana kalitao izay azo soloina maharitra amin'ny fizahan-tany marobe.
Ny mpitondra fanjakana dia:
• Ny fidiram-bola mivantana amin'ny fiarovana sy fitantanana ireo faritra voajanahary sy arovana
• Fantaro ny filàna ny fizaram-paritry ny fizahantany fizahan-tany sy ny drafitra fitantanana mpitsidika izay kasaina ho tohanana ara-tontolo iainana
• Ataovy lohalaharana ny fampiasana ny fandalinana ny tontolon'ny tontolo iainana sy ny sosialy ary manara-maso ireo programa maharitra mba hanombanana sy hampihenana ny fiatraikany
• Hamarino fa ny fampandrosoana ny fizahan-tany dia tsy mihoatra ny fetra ara-tsosialy sy tontolo iainana amin'ny fanovana azo ekena araka izay tapa-kevitr'ireo mpikaroka fiaraha-miasa amin'ireo mponina eo an-toerana
• Manangana fotodrafitrasa izay natao mifanaraka amin'ny tontolo iainana, mampihena ny fampiasana solika fôsily, mitahiry zavamaniry sy bibidia eo an-toerana ary mifangaro amin'ny tontolo voajanahary
Mety amin'ny ho avy
Na dia manana ny lesoka aza i Karaiba, dia manana fananana voajanahary be dia be izay manan-danja amin'ny planeta. Miaraka amin'ny fitantanana marina (an'ny daholobe sy ny tsy miankina), ireo firenena nosy dia afaka ny ho lasa prototypo amin'izay mety ho ecotourism ary tokony ho izy rehefa manova ny hevitry ny fizahantany isika avy amin'ny tsipika famokarana, maodelin'ny orinasan-tserasera be varotra ho fandraisana andraikitra vaovao ho an'ny mpandraharaha miorina amin'ny ekolojia. hiroborobo izany amin'ny taonjato faha-21.